ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆောင်းပါးဝေဖန်ခံရ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆောင်းပါးဝေဖန်ခံရ
ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆောင်းပါးဝေဖန်ခံရ
Posted by Bayote on Aug 10, 2011 in Critic, Myanma News | 16 comments
အများပြည်သူ အမှန်တရားသိစေရန်Eleven မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
အယ်ဒီတာမှ.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဧရာဝင်္တအတွက်ပန်ကြားချက် ကို ပီဒီအက်ဖ်နှင့် ပူးတွဲတင်ပေးထားပါသည်။
NLD-on-Irrawaddy << To Download
စိတ်ဓာတ် အောက်တန်းကျတဲ့ ကောင်က ရေးခိုင်းတာကို..
စိတ်ဓာတ် အောက်တန်းကျတဲ့ ကောင်က ရေးတယ်..
ပြီးတော့ သတင်းစာမှာ ရေးတယ်..
ခွေး လောက်တောင်မှ အသိဥာဏ် မရှိတဲ့ အကောင်တွေ….
လမ်းဘေးက ခွေးတွေ သေသလို ထက် ဆိုးတဲ့ နည်းနဲ့ သေသင့်တယ်..
ပြီးတော့ လုပ်လိုက်သေးတယ်.. လျှပ်စစ်ဝန်ထမ်း တစ်ဦးတဲ့..
အဲဒီလို လူစိတ်မရှိတဲ့ ကောင်.. တစ်သက်လုံး လူ လို မနေရပါစေနဲ့….
ဆရာ လူထု စိန်ဝင်းနဲ့ Eleven Media Group ကို လေးစားပါတယ်…
ဖြစ်သင့်တာကတော့.. အဲဒီ မြန်မာ့ အလင်း ကို မြန်မာ့ အမှောင် လို့ နံမည်ပြောင်း..
ကြေးမုံကိုလည်း………….. ဗွက်ပုံ လို့ အမည်ပြောင်း…..
နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာ အယ်ဒီတာတွေလည်း…. ခွေးကောင် လို့ အမည်ပြောင်းသင့်ပြီ..
နိုင်ငံ နဲ့ လူမျိုး ပျက်စီးမယ့် အရေးကို မပျက်စီးပါဘူးလို့ ဘူးခံငြင်းတဲ့ အကောင်တွေ……… ပါးစပ်ထဲ… ငုတ်ဝင်ပြီး…. တစ်သက်လုံး ဆေးကု နေရပါစေ…
မင်းပြည့်ရေ သတင်းစာရော ရေးသူရော အယ်ဒီတာရော
ရှိတဲ့ ပစ္စည်း ယူသွားလို့ရတယ်..
ဒီလိုပါပဲ… ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ကိုယ် ကိုယ့်ရပ်တည်မှုနဲ့ကိုယ်….
လုပ်ချင်တာ လုပ်ကြတာ.. ဘယ်လိုမှ မမြင်ပါဘူး….
ယုတ်မာလို့ ရတယ်.. အတိုင်း အတာ တစ်ခုပေါ့…
အစိုးရနံမည် ခံပြီး သူခိုး ဓါးပြ လုပ်တာကို မပြောလိုပါဘူး…. သူ့ လောဘနဲ့ သူလေ..
ဒါပေမယ့်… လူမဆန်တာကိုတော့ ကျွန်တော်မုန်းတယ်..
ကျွန်တော်လည်း မင်းခစား လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်…
ခဏ ခဏ ကြုံပါတယ်.. မဖြစ်နိုင်တာတွေ မဖြစ်သင့်တာတွေကို ခိုင်းတာ..
ဥပမာ.. ဒီကောင်မလေး ငါ သဘောကျတယ်ကွာ.. ငါ့ပြောပေး ဆိုတာမျိုး က အစ..
အဲဒီ အခါ.. ဟာ… အဘ.. မလုပ်ပါနဲ့.. မကောင်းပါဘူး….ဖြစ်အောင် တားလို့ရပါတယ်..
နောက်တစ်ခု.. ဆက်သွယ်ရေး က ဆရာ တစ်ယောက် မြေကြီးထဲ က ကြိုးတွေကို ဒိုဇာနဲ့ ထိုး မိလို့ ကြိုးတွေ ပျက်ကုန်တော့…လည်း..
ဗိုလ်ချုပ်က မေးတယ်.. အချိန် ဘယ်လောက် ကြာမလဲ.တဲ့….
ဟုတ်ကဲ့ အဘ.. တစ်ဘက်ကို ကြိုး ၄၀၀ နှစ်ဘက်ကို ပြန်ဆက်ရမှာ ဆိုတော့ စုစုပေါင်း ၈၀၀
ကျွန်တော့လူ ၂ ယောက်နဲ့ ဆက်မှာ နာ ရီ ၂၀ ကျော်ကြာမယ်..အဘ လို့ ပြောတော့.
ငါ့လူ ၂၀ လွှတ်ပေးမယ်.. မင်း ၂ နာရီ အတွင်း ပြီးအောင်လုပ်တဲ့..
အဲဒါနဲ့ အဘ တစ်ခု လောက် တင်ပြခွင့်ပြုပါ..အဘ.. ဆိုတော့ ပြောတဲ့.
အဲဒီမှာ.. အဘ.. မိန်းမ တစ်ယောက် က ယောက်ျား တစ်ယောက်ယူရင်..
ကလေးမွေးဖို့ ကိုးလလွယ် ဆယ်လ ဖွားရတယ်.. အခု အဘ လုပ်ပုံက အဲဒီ မိန်းမကို ယောက်ျား နှစ်ယောက်ပေးစားပြီး ၅ လတည်းနဲ့ ကလေး မွေးခိုင်း သလို ဖြစ်နေတယ် အဘ လို့ပြောလိုက်တော့.. သူက ဆဲ တယ်.. ဘာညာပေါ့..
ဒါပေမယ့် ကိုယ် ဖြစ်ချင်သလိုပဲ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်.. နာရီ ၂၀ ကျော် အချိန် ယူခဲ့ရတယ်..
ပြောပြချင်တာက.. ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်…. သူတို့ နားဝင်အောင်ပြော…
ကိုယ် ရောက်နေတဲ့ နေရာကနေ.. ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် အကျိုးပြုနိုင်အောင်.. ကာကွယ်နိုင်အောင် ကြိုးစားရမှာ.. အဲသလို မဟုတ်ဘဲ.. ခိုင်းသမျှ လုပ်နေမယ် ဆိုရင်တော့ သူတို့ အမေကို .. ရှေ့တန်းကစစ်သားတွေ ဆီ လွှတ်ပေးလိုက်ပါ.. ဆို လွှတ်မတဲ့လား…..
အဲဒါကြောင့် ဆဲတာပါ.. မလုပ်သင့်တာကို လုပ်လို့….သိသိကြီးနဲ့ လုပ်လို့…
ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်ကနေ.. ကိုယ့်အကျိုးကို ရအောင်ယူစေချင်ပါတယ်….
ဘယ်သူတွေ ဘာမှ မရချင်နေပေါ့..ဒါပေမယ့်..ကိုယ့်ကြောင့် အတော်များများ ပျက်စီးစေမယ် ဆိုရင်တော့ အဲဒီလူဟာ. လူ မဆန်တော့တာ သေချာတယ်..
ဘာကြောင့်ဆို ခေါင်းဆောင်ပိုင်းက မှားနေတာတွေကလည်း အဲဒီလို ငကြောင်တွေကြောင့် အများကြီးပါတယ်.. မင်းခ ယောက်ျားတွေ မဟုတ်ဘူး..ကပ်ပါးကောင်တွေ…ကပ်ဖားတွေ….
I sawalot of potential, logic, idea & raw materials from you.
Why don’t you write an article.
I would like to read your article, Please.
“လအလိုက် ရေစီးမှုတစ်ခု တည်းကြည့်ပြီး ဧရာဝတီမြစ်အောက်ပိုင်းမှာ ဘာမှမထိခိုက်ဘူး ဆိုတာကလည်း မပြည့်စုံဘူး။ အခုတောင် ဧရာဝတီမြစ်ဟာ မြစ်လက်တက်တွေမှာ ဆောက်တဲ့ဆည်တွေကြောင့် ကောစပြုနေပြီ။ ရေကြောင်းပြောင်းနေပြီ။ နွေရာသီဆိုရင် မြစ်ဝကျွန်းပေါ် အချို့ဒေသတွေမှာ နွေရာသီ ရေချိုပြဿနာ တွေ့နေရပြီ။”
ဧရာဝတီရယ် နောက်ဆို နင့်အသွေးအသားတွေခန်းခြောက်သွားရတော့မှာ။ငါတို့ ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်ပေမယ့်။ငွေမက်တဲ့အရူးတွေကတော့ ဆက်လုပ်ကြမှာပေါ့။
“အသက် ၃၀၊ ၄၀ အရွယ် လူငယ်၊ လူလတ်တွေဖြစ်ပြီး စင်ကာပူတက္ကသိုလ်က PhD ဘွဲ့ရသူတွေ ပါပါတယ်။”
PhD ဖြစ်ရုံ နိုင်ငံခြားသား ဖြစ်ရုံ နဲ့တော့ လက်ခံလို့ မရပါဘူး ….
ဒီနိုင်ငံမှာက အတွေ့အကြုံအရ လာတ်ထိုး ကျွမ်းကျင်ကြပါတယ်…
ဒါကြောင့် ကျိုးကြောင်း ဖော်ပြမှု ကို သေခြာ စဉ်းစားပြီး ဆုံးဖြတ်ဖို့ လိုပါတယ် …..
ကျွန်တော်တို့ဆီက တာဝန်ရှိတဲ့ ဆိုတဲ့ သူတွေကိုတော့ ယုံကြည်လို့ မရသေးတာတော့ သေခြာပါတယ်….
မြစ်ဆုံ စီမံကိန်း လုပ်သင့်တယ် မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာ ပြည်သူကို တကယ် ကိုယ်စားပြုတဲ့ အပြင်… တိုင်းပြည်အကျိုး အမှန်လိုလားတာ သေခြာတဲ့ အစိုးရ မှန်ပြီဆိုမှ ပဲ ပြန်စဉ်းစားသင့်တယ်….
အားလုံးစိတ်မကောင်းကြဘူး..နောက်ဆိုေ၇ရှည်မှာ နယ်ခံတွေရော တတိုင်းပြည်လုံးမှာပါ ဒုက္ခရောက်မယ်.ကိစ္စ..။ ကျနော်တို. အားလေးတွေနဲ.တော. သူတိုကဖြုံမှာမဟုတ်ပါဘူး.. တကယ် ဒီကောင်တွေနဲ. ထိပ်တိုက်တိုးနိုင်တဲ. အဖွဲ.အစည်းတွေပေါင်းပြီး ကျနော်တို.အပါအ၀င် စုစုစည်းစည်း လုပ်မှ။ ကြားရသမျကတော. ရင်နာစရာတွေပါပဲဗျာ
ခေတ်မှီဖွတ်ထွက်နေသော နိူင်ငံတော်သစ်ကြီးကို အကောင်အထည်ဖေါ်နေကြတာပေါ့လေ။
Delta သားတွေ နာဂစ်ဒဏ်ကနေ နာလံမထူနိူင်သေးခင်
မြစ်ကြီးနားက သူငယ်ချင်းက ဟိုတလောကတော့ ပြောတယ် မြစ်ဆုံမရောက်သေးရင် လာကြည့်ထားတဲ့ နောက်ဆိုရင် ရှိမှာ မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ သူတို့ငယ်ငယ်က မြစ်ဆုံဆိုတာ စာဖွဲ့လို့တောင်မဆုံးအောင် လှတာတဲ့ အခုတော့….
Dam တခုတည်ဆောက်တာကို တင်ပြကြတဲ့ impact report မှာ ဒေသတွင်းနဲ့ ဆက်စပ်ဒေသတွေမှာ နောင် နှစ် (၅၀/၁၀၀) စသည်တို့မှာဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမယ်ဆိုတာ၊ ရှင်းလင်းဖေါ်ပြခြင်းအလျင်းမရှိတဲ့ report ဖြစ်နေပါတယ်။ အဆိုးဆုံးက independent ဆန်းစစ်တဲ့ တတ်သိပညာရှင်များ ရဲ့ ဆန်းစစ်ချက်မရှိခြင်းဟာအဆိုးဆုံးပါဘဲ။ ရေတိုရလာမဲ့အကျိုးစီးပွားတခုတည်းကိုကြည့်ပြီး အစိုးရက သဘောတူခွင့်ပြုခဲ့ရင်တော့ သိပ်မှားမှာဘဲ။ လာမဲ့ လွှတ်တော်အသီးသီးမှာဒီကိစ္စ ဆွေးနွေးမလား၊ ဆွေးနွေးခဲ့ရင်လဲ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ အစည်းအဝေးကြီးတုံးကလို၊ အဆိုရှင်ကပြန်ရုတ်သိမ်းတဲ့ အဖြစ်မျိုးဖြစ်သွားမလားဆိုတာ ကိုကြည့်ရပါ့မယ်။
လက်ရှိနိုင်ငံတွင်းအရေးတကြီးဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ကိစ္စတွေကို ကိုယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ (မဲလိမ်တယ်ဘဲပြောပြော) အမတ်မင်းတွေ ကဘယ်အထိ လူထုအကျိုးကို ကြည့်မလဲဆိုတာ၊ ခုလာမဲ့ လွှတ်တော်တွေမှာကြည့်ကြရအောင်….
ဒါမှ တကယ်ကိုေ၇သည်ယောက်ျား ဖြစ်နေပြီ သူ.အဖေတရုတ်ကို ရေပါရောင်းစားတော.မှာ
မင်းတို. သမီးတွေသာ တရုတ်တွေဆီေ၇ာင်းလိုက်ပါတော. နအဖ အဖွဲ.အစည်း တို.ရယ်
တောင်သူလယ်သမားတွေက ပြည်သူတွေရဲ့ ကျေးဇူးရှင်တွေ၊
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဧရာဝတီအတွက်ပန်ကြားချက် ထွက်လာလို့..
ကြည့်နေကြည့်နေ၊ အဲဒီ မေခ မလိခ မြစ်ဆုံကို လုပ်ပြီးရင် တရုတ်ပြည်ကြီး ဆိုဗီယက်လို အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ကွဲသွားလိမ့်မယ်။ မြေကြီးလက်နဲ့ပုတ်ရင်တောင် မှားဦးမယ်။
ဟိတ်လူကြီး… ဘယ်ပျောက်နေတာလဲ? ခုမှပြန်ပေါ်လာတော့တယ်
တစ်ယောက်တည်း ရှူံးနေရတာ အားငယ်လို့.. ခုမှ အရှည်ကြီး ရှူံးတဲ့သူ ပြန်တွေ့တော့တယ်
Save our Ayerwaddy…